Izixhobo zasimahla ezikwi-Intanethi ezinokuthi umfundi ozimisele ukufundisisa phesheya angafuna i-2022
Izixhobo zasimahla ezikwi-Intanethi ezinokuthi zifunwe ngumfundi onomdla wokufunda phesheya
Ukufundisisa phesheya yeyona ndlela ilungileyo, kodwa kubaluleke ngakumbi ukwazi ukuba ungazilungisa njani iingxaki anokujongana nazo umfundi. Izixhobo ezininzi ezikwi-Intanethi zinokunceda abafundi ngendlela ebhetele. Ezi zixhobo ziya kubavumela ukuba baphumelele kumabanga aphezulu kunye nemisebenzi yokuphupha.
Ezinye zezixhobo ziya kuba zikhonza kwi-intanethi kwaye simahla, kodwa ezinye azizukuvumela abafundi ukuba bonwabele mahala kwiimpawu zeendleko. Ezinye izixhobo ezibalulekileyo zidweliswe apha ngezantsi, eziza kunceda abafundi ukuba bafunde phesheya:
Umhloli welungelo lokushicilela
Qalisa kwakhona umakhi
Isixhobo sokubhala kwakhona
1 Ukubaluleka kokujonga ukukopa ngokukhululekileyo
2 Sicebisa okona kulungileyo kwelungelo lokushicilela kwi-intanethi
2.4 Khangela iingxelo zengxelo
3 Ukubaluleka kwezixhobo zokubhala ngokutsha
4 Izixhobo ezahlukileyo zokucacisa kwi-Intanethi
4.1 Umbhali kwakhonaGuru
4.3 Jikelezisa umBhali kwakhona 11
4.4 Ilizwi AI
5 Ukubaluleka kokuqhubeka kwakhona komakhi
5.1 Kuyacetyiswa ukuba usakhele kwakhona simahla
5.1.1 I studio yoyilo
5.1.2 UZety Qalisa kwakhona umakhi
5.1.3 Qhubeka noncedo
Ukubaluleka kokujonga ukukopa ngokukhululekileyo
Abafundi mabaze nezixhobo zokukhuphela ebomini babo. Isikimu sokutshekisha ukukopa siya kubanceda ukuba bafumane amabakala aphezulu kunye noxabiso kubaphathi babo. Ewe iqinisekile ukuba ayinguye wonke umntu onokubhala umxholo we-100% yoqobo.
Njengoko sonke kufuneka siqwalasele ulwazi oluvela kwi-intanethi kwaye i-intanethi igcwele umxholo. Kodwa ukukopela izabelo zasimahla kufuneka zingeniswe kwiiyunivesithi zaphesheya nakwilizwe lakho. Ngaphandle koko, unokuxhonywa kolu lwaphulo mthetho.
Sicebisa okona kulungileyo kwelungelo lokushicilela kwi-intanethi
Ukutshekishwa kokubhala kunokwenzeka ukuba kwenzeke kuzo zonke iintlobo zabafundi ngelixa besebenza Izixhobo ezincinci. Ijonga umxholo ongqonge iiwebhusayithi ezaneleyo.
Abafundi banokuqikelela ukwahluka kwezabelo zabo ngaphakathi kwepesenti ngokukhawuleza. Iziphumo zokukopa zibonakalisiwe kubo kwifomu yepesenti. Iifomathi zeefayile ezininzi zixhaswa sesi sixhobo.
Abafundi banokudibanisa nayiphi na i-URL echaziweyo kwaye bavumelekile ukukhuphela ngaphandle idilesi yewebhusayithi ethile. Uyakuqonda indlela ephucukileyo yokutshekishwa kwesi sixhobo simahla.
Kwakhona, tnanku umvavanyi wokukopa ngoku Isiqendu oko kunceda abafundi ukuba bajonge ubunyani bezabelo zabo ngaphandle kwexesha.
Ithelekisa umsebenzi onikiweyo kunye nawo onke amajelo e-Intanethi ukufumana umxholo okhutshiweyo.
Abafundi banokujonga ngokulula ubungqonge bomsebenzi wabo wokufunda ngobuchwephesha bokukhangela obunzulu.
Obu buchwephesha butyhila isabelo osinikiweyo kwaye buqaqambisa isicatshulwa esingafaniyo nesibhalwe kumxholo.
Ikwabonelela ngenketho yokukhuphela ingxelo ebhaliweyo ebhalwe kwifomathi ye-HTML okanye yePDF.
Esi sixhobo senza ukukhangela ukukopa kube lula nakwabaqalayo. Kukwangumvavanyi wokubonelela ngokukhululekileyo ovumela abafundi ukuba bahlole amagama angama-1000 simahla.
Ukugqitha kulo mda, ungajonga ukuya kuma-25K amagama asimahla kodwa ngesixhobo esihlawulelweyo. Ukutshekishwa kokubonelela kunika iziphumo kwangoko ngaphandle kwexesha.
Khangela iingxelo zengxelo
Abafundi bavavanya umxholo wabo kwaye bafumanisa iindlela zokutshekisha ngokugudileyo ngesixhobo sokukopa. Igcina ngokuthe ngqo idatha ukuba imixholo iyasuswa kulwazi lwayo emva nje kokuvavanywa kwemicimbi yokufana.
Ukubaluleka kwezixhobo zokubhala ngokutsha
Abafundi babelwe ukuba babonise isiqwenga somsebenzi ngexesha elimiselweyo. Ngale ndlela, ababhali be-Intanethi ababancedayo baphinde baphinde banike idatha eninzi kumcimbi wemizuzwana.
Izixhobo ezahlukileyo zokucacisa kwi-Intanethi
Sisixhobo esisebenzayo sokubhala kwakhona esisebenza ngokujonga ukukopa kwidatha ebonelelwe ngabafundi. Iindidi ezahlukeneyo zezithethantonye ziyafumaneka apho.
Ukongeza, isixhobo seParaphraser.io esichazayo sinika ithuba lokususa isicatshulwa esikhutshiweyo esisetyenziswe kwisabelo.
Inceda abafundi ukuba bangenise amaphepha ophando awodwa kunye nokukopisha ngaphandle komqobo.
The Amagqabantshintshi Ukuskena uxwebhu olinikiweyo kuze endaweni yamagama athile kufakwe ezona zithethantonye zawo ukuthintela ukukopela.
Eyona nto intle malunga nale rephraser kukuba iyafumaneka kwiilwimi ezininzi kubandakanya isiFrentshi, isiJamani, kunye nesiTurkey.
Jikelezisa umBhali kwakhona 11
Inokuvelisa umxholo owahlukileyo okwi-1000 kowakho kunye nowokuqala. Uya kucetyiswa ukuba usebenzise oonobumba abahlukileyo besi syntax. Abafundi banokufikelela kwinqaku ukusuka kugcino lwamafu ngokusebenzisa esi sixhobo silungiselelwe kakuhle.
Iya kujikeleza amanqaku omfundi kwimizuzwana nje embalwa. ILizwi AI lifumana intsingiselo yemixholo yokwenyani kwaye lisebenzise ubukrelekrele bokuyibhala kwakhona.
Ukubaluleka kokuqhubeka kwakhona komakhi
Abafundi bafuna umsebenzi wabo wamaphupha emva kokugqiba izifundo zabo ezivela phesheya. Kule nkalo, bayacetyiswa ukuba benze ugcino olupheleleyo lweenkcukacha zabo zokufunda ukutsala abanini beenkampani ekuboneni kokuqala.
Uya kufumana ngokulula umenzi we-intanethi kwi-intanethi. Baninzi abakhi besiqalo simahla, kodwa ayizizo zonke izixhobo ezikukhonza ngaphandle kweendleko.
Kuyacetyiswa ukuba usakhele kwakhona simahla
I studio yoyilo
le qalisa ukwakha kwakhona simahla uya kukugunyazisa ukuba wenze i-resume yasimahla. Iya kubonelela ngokujonga ngobuchule ekuqhubekeni kwakho. Uyakonwabela ukukhokelwa ngokuzenzekelayo kule ndlela yokuqalisa kwakhona kwi-Intanethi.
Iitemplate ziya kuba zezangoku kwaye zinokubamba ukubonwa komphathi wenkampani. Iya kusebenza ngokukhawuleza. Abafundi banokwenza utshintsho kwi-resumes zabo.
UZety Qalisa kwakhona umakhi
Uya kuyakha i-resume yakho yasimahla. Ikusebenzela ngaphezulu kweetemplate ezingama-20 ezingenanto. Unokongeza ulwazi lwakho nakweyiphi na itemplate oyithandayo.
Ziitemplate ezipholileyo zeCV ezenza ukuba ibe ngowona makhi ubalaseleyo wokuqhubeka kwakhona. Abafundi bakhetha ukwenza i-intanethi kwakhona ukugcina ixesha labo kwaye bonwabele isikhokelo esisebenzayo.
Iya kukunceda wenze indawo yakho kwi-intanethi ukuya kwicandelo. Izikhewu kufuneka zigcwalisiwe ngabafundi.
Ke lo makhi wokwakha omangalisayo uya kubeka lonke ulwazi kunye aze anike imbonakalo emangalisayo. Uya kubonelelwa ngeetemplate ezingama-20.
Idatha ebhalwe kwangaphambili inokusetyenziswa. Abafundi baya kunikwa ukonwabela iingcebiso zasimahla. Kodwa ayizukubonelela ngeleta yesimahla. Ukuba ufuna isixhobo esihlawulelweyo, kuya kufuneka uhlawule i $ 7.90 ngenyanga kunye ne- $ 2.90 yeentsuku ezili-14.
Uxhasiwe Ikhonkco elixhasiweyo
Post Previous:Iiplatifti ezi-9 eziPhambili zokuFunda kwi-Intanethi ezinesicelo sasimahla
Okulandelayo Post:Izikolo ezili-15 zaBongikazi eziPhambili kwiiPhilippines